China 20T tube ice umshini ifektri kanye nabaphakeli | Izinhlelo ze-Herbin Ice
i-flake ice evaporator
Abenzi beqhwa bezentengiselwano
Slurry ice umshini
Vimba imishini yeqhwa
Isikhunta seqhwa lebhola
Isikhunta seqhwa ledayimane
Cube ice isikhunta
Umshini wokupakisha we-Ice
20T tube umshini weqhwa
10T Tube umshini weqhwa
Umshini weqhwa le-5T
3T tube umshini ice
Amandla okugijima: 62.5 KW.
Ukushisa kweqhwa: Khipha u-5 ℃.
Ikhwalithi ye-Ice: Okusobala kanye ne-crystal.
Ice ubukhulu: 22mm, 29mm, 35mm noma okunye.
Isiqandisi: R404a, R448a, R449a, noma okunye.
Ukunikezwa kwamandla: 3 isigaba sokuphakelwa kwamandla kagesi ezimbonini.
Umthamo wokukhiqiza weqhwa nsuku zonke: ama-20,000 kgs wamapayipi e-ice ngamahora angama-24.
Isimo sokusebenza esijwayelekile: i-30 ℃ kuma ne-20 temperature lokushisa kwamanzi.
Ukusetshenziswa kwamandla: u-75 KWH kagesi wokwenza wonke amathani ayi-1 amaqhwa eqhwa.
Iqhwa le-Tube luhlobo lweqhwa eliyize le-cylindrical elinobubanzi bangaphandle ø22 、 ø29 、 ø35mm nobude obungu-25 ～ 42mm. I ububanzi imbobo ngokuvamile ø0 ～ 5mm futhi kungase kushintshwe ngokuvumelana ice ukwenza isikhathi.
Izici: Iqhwa le-Tube likhulu futhi lisobala ngenkathi yokugcina ende. Akunakwenzeka ukuthi kuncibilike ngesikhathi esifushane. Iqhwa le-Tube lihle kakhulu, futhi lingaba yi-100% esobala, i-crystal. Kubukeka kamnandi kakhulu esiphuzweni, isiphuzo.
Isicelo: Ukudla kwansuku zonke, isiphuzo sokupholisa, isiphuzo, ukugcina imifino nezinhlanzi zasolwandle zintsha, njll.
Izithombe zemishini yeqhwa le-10T / yosuku esenziwe ngaphambili.
Nazi izinzuzo eziyinhloko zemishini yami yeqhwa le-Tube.
Ikhophi lezinto ezinhle kakhulu futhi ezingcono kunezihamba phambili.
Ngokuhlukile kwamanye amafektri emishini yeqhwa, uHerbin Ice system yanikela ngobuchwepheshe bendabuko besiShayina be-tube ice ngo-2009. Siqala ukutadisha futhi sicwaninge ubuchwepheshe beqhwa lweVogt kusukela ngo-2009.
Ngokucwaninga nokuthuthuka okuqhubekayo nokuqhubekayo, manje sesingenza imishini ye-tube ice ngokusebenza okuhle kakhulu. Imishini yeqhwa le-Tube izinzile futhi inesikhathi eside kakhulu senkonzo. Imishini isebenza kahle futhi isindisa kakhulu amandla. Amashubhu e-ice enziwe yimishini asobala, akhazimulayo futhi mahle.
Imishini inobuchwepheshe bokugcina be-tube ice. Ama-evaporator afakwe inzwa esezingeni loketshezi, egcina izinga loketshezi linengqondo. Kwenza ukushisa kokuhwamuka kohlelo kube ngaphansi kolawulo kahle kakhulu. Okwamanje, sifaka isamukeli soketshezi ngaphezu kwe-evaporator, 2 abashintshi bokushisa ezindaweni ezidingekayo, ukunikezwa kuketshezi okuhlakaniphile, njalo njalo.
I-compressor izohlala isebenza isebenza kahle kakhulu ngenkathi amanye ama-compressors womshini weqhwa waseChina onakaliseka kalula ngesikhathi sokuncipha.
Ngenxa yobuchwepheshe bethu obuphakeme kanye nohlelo lwe-smart system, singasebenzisa i-compressor encane ukufinyelela umthamo weqhwa ofanayo. Lokho kuqhathaniswa neminye imishini ye-Chinese tube ice. Nge-compressor encane, imishini yethu ye-tube ice isebenzisa ugesi omncane ukwenza iqhwa elilinganayo.
Ake sibale ngomshini we-10T / day tube ice.
Eminye imishini yamaqhwa aseShayina apholile asebenzisa u-105KWH kagesi ngokwenza ithani elilodwa leqhwa.
Imishini yami ye-tube ice isebenzisa kuphela u-75KWH kagesi ngokwenza ithani elilodwa leqhwa.
Umehluko wokwenza njalo ithani eli-1 lamashubhu e-ice ngu-30KWH kagesi.
Ngakho-ke nsuku zonke, umehluko wokusetshenziswa kukagesi yi-30x20 = 600KWH.
(105-75) x 20 x 365 x 10 = 2,190,000 KWH, lowo umehluko wokusetshenziswa kukagesi eminyakeni eyishumi.
Uma amakhasimende ekhetha umshini wami we-20T / day tube ice, bazokonga u-2,190,000 KWH kagesi eminyakeni eyishumi.
Uma ikhasimende likhetha omunye umshini weqhwa wobuchwepheshe obumpofu, uzosebenzisa imali ethe xaxa ukukhokhela lokho kusetshenziswa kukagesi okungeziwe okungenangqondo, 2,190,000 KWH.
Malini ngo-2,190,000 KWH kagesi ezweni lakho?
I-2,190,000 KWH kagesi icishe ibe ngu-US $ 300,000 eChina.
3. Ikhwalithi enhle newaranti ende.
Ama-80% wezinto ezisemshinini wami we-tube ice brand yimikhiqizo edumile yomhlaba wonke njengeBitzer, GEA Bock, Danfoss, Schneider, njalonjalo.
Ithimba lethu lokukhiqiza elisebenzayo nelinolwazi lisebenzisa ngokugcwele izingxenye ezinhle.
Lokho kukuqinisekisa ngemishini yeqhwa esezingeni eliphakeme ngokusebenza okuhle kakhulu.
Iwaranti yohlelo lwefriji yiminyaka engama-20. Uma ukusebenza kwesistimu yefriji kuguquka futhi kuba okungajwayelekile phakathi neminyaka engama-20, sizoyikhokhela.
Ayikho igesi evuzayo yamapayipi eminyakeni eyi-12.
Azikho izinto ezibandayo eziwohloka eminyakeni eyi-12. Kubandakanya ama-compressor / condenser / evaporator / valves valve ....
Iwaranti yezingxenye ezihambayo, ezinjengezimoto / impompo / amabheringi / izingxenye zikagesi, zineminyaka emi-2.
4. Isikhathi sokulethwa esheshayo.
Imboni yami ingenye yezindawo ezinkulu kakhulu eChina ezigcwele abasebenzi abanolwazi.
Asidingi izinsuku ezingaphezu kwezingu-20 ukwenza i-3T eyodwa noma eziningana ngosuku, i-5T / usuku, i-10T / imishini ye-tube yeqhwa.
Asidingi izinsuku ezingaphezu kwezingama-30 ukwenza i-20T / ngosuku eyodwa noma eziningana, imishini yeqhwa le-30T / day tube.
Isikhathi sokukhiqiza somshini owodwa nemishini eminingana siyefana.
Ikhasimende ngeke lilinde isikhathi eside ukuthola imishini ye-tube ice ngemuva kokukhokha.
Langaphambilini 10T Tube umshini weqhwa
Ikheli:I-China, i-East Asia